Guuglii - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 4:56 29 Ebla 20214:56 29 Ebla 2021
Google sababa covidf ji'a sadii keessatti qofa dolaara bil. 17 buufate
Weerara kornaavaayirasii hordofee namoonni mana keessa akka turaniif uggurri kaa'ame dhaabbata Google bu'aa olanaa akka argatu gummaacha olaanaa taasiseera jedhame.
...tti maxxanfame 8:45 9 Bitooteessa 20218:45 9 Bitooteessa 2021
Hojjettoonni 'miidhaa sanyummaa' himatan eeyyama bahuu qabu - Google
Gabaasi NBC hojjettoota Google rakkoon haleellaa sanyummaa irra ga'e kudha lama adda baaseera. Bara darbe hojiisaanii kan dhaban hojjettoonni hubannoo nam - tolchee (AI) dhaabbatichaa Timnit Gabruu fi Maargaareet Miichel kanneen miidhaman keessaati.
...tti maxxanfame 7:01 20 Guraandhala 20217:01 20 Guraandhala 2021
Google lammii Itoophiyaa booda ogeettii gameettii teeknolojii biraa hojiirraa ari’e
Dhaabbanni Google hundeessituu fi wiirtuu hubannoo nam – tolchee (AI) dhaabbatichaa hoogganuu keessaa qooda qabdu dambii dhaabbatichaa diigde jechuun ari’e.
...tti maxxanfame 8:59 23 Amajjii 20218:59 23 Amajjii 2021
Google yoo seerri haaraan walitti dhufeenya inni maxxansitoota waliin qabu hojiirra kan oolu ta'ee gabaa Awustiraaliiyaa keessaa dhiisee akka bahu doorsiiseera. Dhuguma Google gabaa Awustiraaliyaa malee jiraachu danda'a?
...tti maxxanfame 10:55 15 Muddee 202010:55 15 Muddee 2020
Google 'dhaabbata loogii sanyii qabudha' jette qorattuun duraanii dhaabbatichaa
Qarattuun hubannoo nam-tplchee ykn 'Artificial Intelligence' (AI) Google kan taatee fi tibbana ari'amuu isheen dubbii ijoo kan taate Timniit Gabruu BBC waliin turtii taasifte jirti.
...tti maxxanfame 10:28 11 Muddee 202010:28 11 Muddee 2020
Hogganaan Google dhimma Timnit Gabruu irratti dhiifama gaafatan
Hogganaan dhaabbatichaa garuu ari'amuu ishees ta'e kaan ifatti hin ibsine.
...tti maxxanfame 6:41 4 Muddee 20206:41 4 Muddee 2020
Hoggantoota garee hubannoo nam-tolchee (Artificial Intelligence (AI)) keessaa tokko kan taateefi loogummaa sanyii qaba jechuun softiweeriin fuula adda baasu akka hojiirra hin oolle gaafatte Timniit Gabruu (PhD) sababa imeelii hojjettootaaf ergiteen ari'amu beeksifte.
...tti maxxanfame 15:17 26 Waxabajjii 202015:17 26 Waxabajjii 2020
Google ragaa namoonni marsariitiirra barbaadan haquu jalqabuufi
Asiin dura marsariitiiwwan fayyadamtoonni mil'atan bakkaa fi kompiitara akkamiirraa akka fayyadamaa jiran dabalatee sa'aatii fi biyyi osoo hin hafin hafteesaa ni galmeessa ture dhaabbatichi.
...tti maxxanfame 9:44 3 Waxabajjii 20209:44 3 Waxabajjii 2020
Fayyadamtoonni intarneetii isaanii 'private mood' (akka eenyuyyuu hin arginetti) godhanii yoo fayyadamanillee isaan hordofaa ture jedhameera dhaabbatichi.
...tti maxxanfame 13:28 20 Muddee 201913:28 20 Muddee 2019
Sababa adda citiinsa sararaatiin Google yeroodhaaf tajaajila adda kute
Tajaajjilli dhaabbata teeknooloojii guddaan gaafa kamisa baha Awurroppaa keessatti addaan cite.